'सीपमूलक जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक शिक्षालयको अावश्यकता'
अन्तर्वार्ता/विचारशुक्रबार, २ चैत्र , २०७४
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)ले सातवटै प्रदेशमा बहुप्राविधिक शिक्षालय खोल्ने प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गरेको छ । सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्ले भन्छन्, “सीपमूलक जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक शिक्षालयको खाँचो छ ।”
प्रत्येक स्थानीय तहसम्म प्राविधिक शिक्षालय किन आवश्यक छ ?
पहिलेका प्राविधिक शिक्षालयहरुलाई स्तरोन्नति गरी प्रदेशपिच्छे एक–एक वटा ‘नमूना बहुप्राविधिक शिक्षालय’ बनाउने हो । हामीले खाका तयार पारिसकेका छौं, सरकारले बजेट र कर्मचारी दियो भने तत्काल कार्यक्रम चलाउन सक्छौं । स्तरोन्नतिका लागि रु.२ अर्ब बजेट चाहिन्छ । ६ वटै महानगरमा महिला बहुप्राविधिक शिक्षालय खोल्ने कार्ययोजना पनि छ । व्यावसायिक वातावरण सिर्जना, आर्थिक–सामाजिक उन्नति, स्वदेशमै स्वरोजगारी र श्रमको सम्मानका लागि प्राविधिक शिक्षालयको ठूलो आवश्यकता छ । अनौपचारिक वा औपचारिक शिक्षा लिएकाहरुको सीप परीक्षणका लागि पनि यो आवश्यक छ ।
भएका प्राविधिक शिक्षालयहरु कति उपयोगी छन् ?
अत्यन्तै उपयोगी छन्, तर आवश्यकताअनुसार व्यवसायीकरण र प्रचार भएको छैन । बजारमा सीपमूलक जनशक्तिको ठूलो माग छ ।
विद्यार्थीहरुले १८ महीने टीएसएलसी वा तीनवर्षे डिप्लोमा कोर्स गर्न पाउँछन् । तीन महीने, ६ महीने कोर्सहरु पनि थुप्रै छन् । ४० विषयमा डिप्लोमा र २५ विषयमा टीएसएलसी गर्न सकिन्छ । यी सब पढ्ने अनि काम शुरु गरिहाल्ने कोर्स हो । रोजगार उन्मुख शिक्षा भएकाले अपवाद बाहेक सबैले काम पाउँछन् ।
प्रत्येक प्रदेशमा बहुप्राविधिक शिक्षालय खुले भने केन्द्रीय कार्यालयको भूमिका के हुन्छ ?
केन्द्रीय कार्यालयले समन्वयको भूमिका खेल्छ । प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहका शिक्षालयहरुमा स्रोत–साधन व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन, नीति–निर्माण, सम्बन्धनलगायतको काम गर्छ । पाठ्यक्रम बनाउने काम पनि केन्द्रीय कार्यालयको हुन्छ ।
नमूना बहुप्राविधिक शिक्षालयमा ५ देखि १० हजार जनशक्तिलाई लाभान्वित बनाउने योजना रहेको सुनिन्छ । जनशक्ति खपत चाहिं कहाँ गर्ने ?
बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । अहिले प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, कार्पेन्टर लगायतमा भारतीय जनशक्ति प्रयोग भइरहेको छ । विकासका गतिविधिहरु भर्खरै चलायमान हुन थालेका छन् । बाहिरको बजार ताक्नै पर्दैन ।